Antdị gantry ụdị cnc cutting machine
Otu onye na-ewere laser bekee efere ígwè iji kpoo ọnụ n'ụlọ
Igwe ihe nkenke laser nwere ike ịhazi ọkpọkọ ígwè ma ọ bụ efere ígwè, ma jiri ya rụọ ọrụ n'ọtụtụ ebe. Otu onye na-ewere laser bekee efere ígwè iji kpoo ọnụ n'ụlọ. Ọ na-eji laser efere efere dị ka anụ ahụ, na-achịkọta efere nke ụdị dị iche iche dị ka mgbaghari jigsaw The Little hou ...
Ihe ngosi - gaa n'ihu ihe ịtụnanya, ntinye aka na saịtị!
Ozi nchịkọta: On May 8, Hebei Cangzhou International CNC Machine Ngwá Ọrụ ngosi ẹkenịmde dị ka ndokwa. Bloor Laser gosipụtara ọgbọ ọhụrụ ya nke igwe ịkụcha laser na igwe ịgbado ọkụ na Ngosipụta Ngwaọrụ Ngwaọrụ International. On May 8, Hebei Cangzhou International CNC Machi ...
Ngwa nke Shandong laser ịcha igwe na kichin na ụlọ ọrụ ịsa ahụ
Site na mmepe nke teknụzụ ọgbara ọhụrụ, teknụzụ nhazi oge ochie nke ụlọ ọrụ kichin agbanweela mgbe niile. Dị ka onye na-akwado ụlọ ọrụ nhazi igwe ugbu a, Shandong fiber laser cutting machine bụ teknụzụ ọhụụ na - eme maka mkpụmkpụ ...
Large-format metal laser ọnwụ igwe nnyefe
A nyochachara ma lelee igwe mpempe akwụkwọ laser dị ukwuu na ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma dị njikere maka nnyefe. Na Eprel 9th, Companylọ ọrụ Bloer nyefere ngwaahịa maka ndị ahịa na mpaghara Jinan. Ngwongwo ndị a zigara n'oge a bụ igwe ejiji laser ọhụrụ, ihe nlereanya bụ CE6025 ...
Kedu ihe kpatara ọtụtụ ndị nrụpụta bidoro ịchụso igwe na-egbu eriri laser
Site na mmepe na agam n’ihu nke sayensi na teknụzụ, ndụ mmadụ na - agba ọsọ ọsọ. Na oge a bụ oge ego, ndụ ndị mmadụ na ọrụ ha na-amalite ịchụso oke arụmọrụ na nkenke, na igwe laser ịchacha ọkụ nwere ike izute ezigbo arụmọrụ ...
Ọzọ metal laser ịcha igwe Ẹnam ekese Ji 'nan Zhangqiu
Tụnyere ndị ọzọ ụdị nke ịcha igwe, laser ọnwụ igwe nwere ọtụtụ uru, ndị a na-agụnye: elu ọnwụ ziri ezi na ziri ezi, elu àgwà n'ọnụ, warara karị obosara, obere okpomọkụ emetụta mpaghara na obere ihe deformation, obere ihe mmetọ na n'efu, ala maintenanc. ..
Olee otú iji zere Mbelata nke eriri laser ịcha igwe nhazi arụmọrụ?
A na-eji igwe ihe eji laser arụ ọrụ ogologo oge, arụmọrụ nhazi ga-ebelata, ọsọ ọsọ na-adị nwayọ, ịkpụcha mmetụta ziri ezi ka njọ. Ya mere, gịnị ka anyị ga-eme ma ọ bụrụ na nke ahụ emee? Nke mbu, maka onodu a, anyi aghaghi ichota ihe kpatara nbibi arụmọrụ, ndi B ...
Kpọkọtanụ ume wee pụọ ọzọ — nzukọ nzukọ Shandong Buluoer nke 2021 mere nke ọma
Iji nwee ike mejupụta ebumnuche atọrọ nke atụmatụ atumatu a na-eme kwa afọ, tọọ ntọala siri ike maka afọ ọhụrụ nke na-achọ ibido. Na March 1, Buluoer mere nzuko igba ahia na 2021 na nzuko iyi; Shandong Jubangyuan Group onyeisi oche Mr. Jing Fengguo, General Manager Mr. Sun Nin ...